Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamed Dheere oo ka hadlay degganaanshaha magaalada Muqdisho 48-dii saac ee la soo dhaafay. | JILYAALE_ONLINE
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamed Dheere oo ka hadlay degganaanshaha magaalada Muqdisho 48-dii saac ee la soo dhaafay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Md. Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed dheere) ayaa sheegay in deggenaanshaha magaalada Muqdisho laga dareemay 48kii saac ee la soo dhaafay ay sabab u tahay kulankii dhex maray Odayaasha dhaqanka iyo Ra´isal Wasaaraha dowladda KMG Soomaaliya.
Hadalkan ayuu guddoomiyuhu ka jeediyay xaflad lagu maamuusayay sanad guuradii 45aad ee ka soo wareegatay xilligii ay xorriyadda qaadatay dowladda Uganda oo maanta ka dhacday Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir wuxuu sheegay in dhowaan ciidamada Booliiska la gaynayo goobo hor leh oo aysan horay u tagin, taasoo qayb ka ah buu yiri qorshaha lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka guud ee magaalad Muqdisho.
Munaasabaddaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federalka oo uu hoggaaminaya Prof. Cali Maxamed Geeddi iyo saraakiil ka socota dowladda Uganda iyo marti sharaf kale.
Prof Geedi oo khudbad ka jeediyay xafladaasi ayaa kaga hadlay xaalada dalka Soomaaliya uu haatan marayo iyo doorka ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin nabad ku soo dabaalida dalka Soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyay ahmiyada ay ku fadhido in shacabka Soomaaliyeed ka faa’iideysato fursada ay heystaan si loo xasiliyo dalka Soomaaliya.
← Faallo: Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf iyo Ra’iisul Wasaare Geedi oo ku loolamaya Siyaasadda dalka Soomaaliya, balse Itoobiya maxay damacsan tahay?.
Toban qof oo ay ka mid yihiin Ciidamo ka tirsan dowladda KMG ah oo maanta ku dhaawacmay qaraxyo lala eegtay baabuur ay wateen Ciidamada Boliska Dowladda KMG ah Magaalada Muqdisho. →